Onyinye afọ òfùfò a bụ nke e nyere n'isi ngwụcha izù ụka gara aga, ma bụrụkwa ótù n'ime atụmatụ ọrụ ahụ ike ndị òtù ahụ ji n'aka na steeti ahụ ugbu a, bụ nke mmadụ ruru nàrị atọ n'ọnụ ọgụgụ sitere na ya wee na-anarakwa ọgwụgwọ n'efu ugbu a. Ihe ndị ahụ e butere gụnyèrè igwè e ji enyòcha ahụ, nkè e ji adọ ma ọ bụ na-amịsịsị ihe ezighị ezi n'ahụ mmadụ, tinyere ọtụtụ akụrụngwa ndị ọzọ.
N'okwu ya dịka ọ na-enyefè ihe ndị ahụ, onye duru ndị òtù ahụ wee bịa ya bụ ijè, bụ Dọkịta Jorson Fernandes kọwara nke ahụ dịka ótù n'ime ntụnye nke ndị otu ahụ nà atụmatụ ha ji n'aka iji kwàlite ezi ọnọdụ ahụ ike ụmụ mmadụ. O mere ka a mara na òtù ahụ bụ 'Rotary International' nwèrè ụzọ isii pụtakarịchara ìhè ha si agbata ọsọ enyemaka na mba ụwa na ngàlàba dị iche iche, ma sị na nke kachara dị mkpà n'ime ha niile bụ ngàlàba ahụ ike, maka na ọ bụ mmadụ dịgodi ndụ, e wee chọba ihe ọ ga-eri.
N'okwu ya dịka ọ na-anabata ya bụ akụrụngwa, kọmishọna steeti ahụ na-ahụ maka ahụ ike, bọ Dọkịta Josephat Akabụike kwuputara obi añụrị ya nyegara ndị òtù ahụ, tòó ha n'ihi ọrụ obi ebere ahụ, ma kpọkukwazie ndị ọzọ dị iche iche ka ha ñòmie ya bụ ezi atụmatụ. O mere ka a mara na ọchịchị steeti ahụ agbago mbọ pụtara ìhè n'ebe o metụtara ịkwàlite ngalaba ahụ ike ya ka ọ bụrụ ịgbà, ma sịkwazie na akụrụngwa ndị ahụ ga-enyekwazị aka n'ụzọ dị oke mkpà iji mee ka ya bụ ụlọ ahụ ike bụrụ eji ama àtụ.
Na ntụnye nke ya, onye na-ahụ maka nhàzi ahụ ike n'ụlọ ọgwụ ahụ, bụ Dọkịta Basil Nwankwọ mere ka amara na ya bụ akụrụngwa ga-enye aka n'ụzọ dị iche iche iji wee kwàlite ọrụ ahụ ike, inyocha ahụ na inye ọgwụgwọ n'ụlọ ahụ ike ahụ na-enweghị ihe nhịa ahụ, ma kwekwa nkwà na ha ga-etinye ya n'ọrụ nke ọma nakwa otu o siri kwesi kwesi.